Blender: yemahara haina kugara ichishata | Linux Vakapindwa muropa
Blender: yemahara haisi kugara ichitowedzera
Isaac | | Graphics, Free Software
Vanhu vazhinji vanofunga kuti zvese zvemahara zvinogara zvichitonyanya, uye izvo hazvisizvo nesoftware, zvirinani yemahara software. Isu tese tinoziva kuti kune zvinonyanya kunakidza mapurojekiti anodarika epamhepo uye yakabhadharwa software. Imwe yemapurojekiti makuru aya Blender, iyo yanga ichishandiswa kugadzirwa kwemitambo yemavhidhiyo inozivikanwa, uye kunyange mamwe mafirimu eHollywood sezvatakataridza mune imwe nyaya yeLxA. Naizvozvo iyo inodhura-yakanaka / yemahara-yakaipa hukama isu tinofanirwa kusiya kumashure.
Ehezve handireve kuti zvese zvemahara zvakanaka uye zvese zvinodhura kana kubhadharwa zvakashata, handizvo futi. Uye iwe unofanirwa kuziva kuti Blender inogona kunge iri yeimwe rakanakisa zvirongwa maererano ne 3D modelling, kuvheneka, kupa, kuchangamuka uye kugadzirwa kwemifananidzo. Iyo kunyange inotsigira dhijitori compositing uchishandisa node kugadzira, vhidhiyo kugadzirisa, kuveza, uye kudhijitari kupenda. Iyo yakazara dhizaini suite uye iyo iyo iwe yauchazoda imwe kudzidza uye moyo murefu kuziva maitirwo azvo nemazvo uye kuwana zvakazara mairi.
Sezvandambotaura, ndeye mahara uye mahara software, mukuwedzera mukuwanikwa mu 25 mitauro uye multiplatform (Android, GNU / Linux, Windows, Mac, Solaris, FreeBSD, IRIX, nezvimwewo). Pakutanga yaigoverwa mahara asi isina kupa kodhi, asi ikozvino yatora rezinesi reGPL uye kodhi yacho inowanikwa kunharaunda yese. Uye kubva kune izvo zveDutch NeoGeo studio kuenda kune yazvino Blender Foundation, chirongwa ichi chakavandudza zvakanyanya ...
Zvakawanda zvekuti zvange zvichishandiswa muvhi ye Usashamisika Captain America, Spider-Man 2, uye mimwe mitambo yemavhidhiyo uye mafirimu mafupi. Kana iwe uchifarira, ini ndinokurudzira kuti iwe utenge bhuku rakanaka kuti uzive mashandisiro aro, kana kutsvaga bhuku rekushandisa paInternet, vhidhiyo dzidziso paYouTube, nezvimwe. Kuti uwane icho unongofanira kuenda ku peji peji purojekiti officer. Nakidzwa nayo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Blender: yemahara haisi kugara ichitowedzera
Erich gonzalez akadaro
Grande Blender iri nyore kushandisa, unogona kuishandisa kuzadzikisa mapurojekiti nemamwe software akadai seMaya, iri software yakasarudzika kwazvo.
Pindura Erich Gonzalez
Daniel Martin akadaro
Blender chirongwa chakanakisa, nekuti icho chinokutendera iwe kuita ese marudzi e 3D dhizaini. Chokwadi ndechekuti ndiri kufara kwazvo uye kusununguka zvine simba kwazvo.
Pindura kuna Daniel Martín
Bodhi Linux 4.1, iyo yekuchengetedza kusunungurwa kweanonyanya kufarirwa lightweight distro
Maitiro ekushandura yedu Debian mune yekutanga vhezheni yeUbuntu